About Us - Qinyang Xianfeng qalabada Co., Ltd
Qinyang Xianfeng ningax Waxyaabaha Plant waxaa la aasaasay sanadkii 1994. Waxaan ku takhasusay ee wax soo saarka, iibinta iyo adeegga ee wax madhxiya. Awoodda sanadlaha daboolayaa 10000 metric ton oo alaabta qalabka farcan korontada iyo balaayiin darafta madhxiya. Shirkadda Dupont waa alaab-dahab ah oo alaabta ceeriin Nomex. Iyada oo horumar sannado badan, waxaan ku leedahay qalabka gacanta technology sare ee producting tayo sare leh laba, saddex iyo afar qalabka farcan lakabka.
waxyaabaha ugu muhiimsan yihiin brand Pioneer qalabada qalabka la tayo sare leh iyo adeegga wanaagsan ee, ay ka mid yihiin korontada qalabada taxane warqad kooban iyo qalabada taxane darafta.
farcan dabacsan korontada taxane warqad qalabada: 6640NMN, 6650NHN, 6641 F CLASS DMD, 6630 DMD.
Qalabada taxane darafta: Maro 2715 qalabada darafta, silicone qalabada darafta.
Our warshad leh ISO9001: 2000 System Tayo Certified. waxyaabaha Our ayaa shahaado by UL of USA iyo ROHS Midowga Euro. Pioneer Brand waxaa abaal brand caanka ah by Dowladda Henan. Waxa kale oo aanu ka heli Product Tayada Sare ee biladda, Advance Enterprise Bilad Dowladda Henan.
In suuqyada maxalliga ah, waxaan leenahay ka badan 200 macaamiisha. Waxaan nahay muddada dheer (ka badan 15 sano) qeybiyaha dahab ah ee Xi'an Sima Motor Co., Ltd., Qarax Wolong Electric Nanyang Protection Co., Ltd., Lanzhou Motor Co., Ltd. Adduunka oo dhan, waxyaabaha our waxaa intooda badan laga dhoofiyay si United States, Midowga Yurub, Bariga Dhexe, koonfur bari Asia, Africa iyo Hijmans iwm
Qinyang Xianfeng qalabada Matearial Factory rajaynayaa adkeeyo xiriirka ganacsi kula daacad iyo soo dhaweyn macaamiisha ka adduunka oo si booqo warshad!